I-Audio-Technica ATH-CK3TW, yeyona nto ibalaseleyo? [UHLAZIYO] | Iindaba zeGajethi
Umkhankaso weKrisimesi usondele kwaye i-avalvalche yonyaka esiyenzayo yokuhlalutya isondela ukuze ukwazi ukuthatha isigqibo ngeyona ndlela ilungileyo malunga nezipho ofuna ukuzinika abanye okanye uzenzele. Kule meko sikuzisa okokuqala imveliso evela I-Audio-Technica, uphawu oludumileyo kwiimveliso zesandi.
Sivavanye iAudio-Technica ATH-CK3TW TrueWireless headphones, imveliso ekumgangatho ophezulu kwisandi kunye nokusebenza kubude obuphezulu. Fumanisa nathi ngokweenkcukacha ezinkulu ezi ze-ATH-CK3TW kwaye ukuba zisibonelela ngokwenyani isandi se-Hi-Fi esisebenziswa kakhulu ngabasebenzisi boludumo lubalaseleyo.
Njengesiqhelo, sifuna ukukhumbuza ukuba phezulu sikushiye nevidiyo kwisiteshi sethu seYouTube apho uya kuba nakho ukuxabisa unboxing yemveliso yayo yonke imixholo yebhokisi yayo, kunye nemifanekiso eneenkcukacha kunye novavanyo olupheleleyo olufanayo.
Ungathatha ithuba ubhalise kwisitishi sethu seYouTube kwaye usishiyele into oyithandayo ukuba uyaluthanda uhlalutyo lwevidiyo yeAudio-Technica I-ATH-CK3TW Kwaye ke uya kusinceda ukuba siqhubeke nokukhula kwaye siqhubeke nokuzisa ezona mveliso zintle kuzo zonke iintlobo zeActualidad Gadget, ngolona phononongo lunyanisekileyo. Ubuthandile? Zithenge ngexabiso elifanelekileyo> Akukho mveliso ifunyenweyo
1 Uyilo: Isiqingatha seBold
2 Ubuchule bobuchwephesha, iHi-Fi kwiflegi nganye
3 Umsebenzi ngokweenkcukacha
4 Umgangatho wesandi, ukuzimela kunye namava
Uyilo: Isiqingatha seBold
Ezi ntloko zivela I-Audio-Technica Banoyilo olutsala umdla wethu ngenxa ye-elektri evaliweyo, kodwa oku kunesizathu, sokufakwa ngokuchanekileyo ezindlebeni zethu ukuze kuveliswe olona luvo lukhulu lokucinywa kwengxolo, kwaye ngokweemvavanyo zethu, umbono ichanekile kwaye ivelisa isiphumo esifunayo.
Ezi ntloko zenziwe ngeplastiki, njengoko bekulindelwe, kwaye yindlela abayifumana ngayo Isiqinisekiso esingangenisi manzi se-IPX2 oko kuyasivumela ukuba sidlale nabo imidlalo ngaphandle koloyiko lokonakalisa izinto zabo.
Sineephedi ezi-8 zokutshintsha i-headset.
Ngokwelinye icala, siya kuba nakho ukufumana ezi ntloko kwiithoni ezimbini, ezimhlophe nezimnyama, ukukhetha komsebenzisi. Kunobungozi obuncinci kule nkalo, kuyila indawo ethe tyaba apho ulawulo lokuchukumisa esiza kuthetha ngalo kamva luya kubakho.
Lixesha lokuba uthethe malunga nebhokisi, kum elona nqaku libi. Inokuba ikhulu ngokugqithileyo, nangona sithathela ingqalelo ukuba inezibuko le-USB-C kwelinye icala, kodwa akukho zi-LED zibonisa ukuzimela, kuphela yi-LED yokutshaja. Kukwenzeka okufanayo ngobungakanani bayo, inebhetri enkulu, kodwa ubukhulu bayo iyonke inkulu ngokucacileyo kunabathengisi bayo, njengee-AirPods okanye iFreeBuds Pro.
Ubuchule bobuchwephesha, iHi-Fi kwiflegi nganye
Ezi ntloko zeNtloko zingenayo i-headphone 5,8mm transducer, unikezela impendulo kwi Ukuhamba rhoqo ukusuka kwi-20 ukuya kwi-20.000 Hz kunye novakalelo lwe-98 db / MW, ngaphezulu kwezinye iimveliso ezikhuphisanayo. Sijikelezisa imveliso nge 16 Ohm impudence, ke ngobuchwephesha sijongana nengcuka eyambethe ufele lwegusha.
Sinesimofowuni yohlobo lwe-SMEM yentloko, oku kunovakalelo lwe-38 dB (1V / Pa kwi-1 kHz), Isiphumo esiza kuthetha ngaso kamva kwiimvavanyo eziqhelekileyo, kwakhona khumbula ukuba kwividiyo sinokuvavanywa ngokubanzi kweemakrofoni kunye nokurekhoda.
Ukunxibelelana nesixhobo sokukhupha isandi sineBluetooth 5.0 enoluhlu oluyi-10m. Kweli candelo sifumene imveliso ngaphakathi kulindeleke kuluhlu lweBluetooth kwaye ngaphandle kwelahleko zonxibelelwano, ukuba ngokucacileyo zidibanisa ngokuzenzekelayo.
Kwelinye icala kufuneka sikhumbule ukuba i-earphone yasekhohlo ayinakusetyenziswa ngokwahlukeneyo, Oko kukuthi, idityaniswe yibhulorho engenazingcingo kunye nefowuni yecala, ebizwa ngokuba yi "Master" kwaye ejongene nokunxibelelana nesixhobo sokuthumela ngeBluetooth 5.0, inqaku ekufuneka lithathelwe ingqalelo kunye netekhnoloji endimangazayo ukuba baqhubeke bayisebenzisa .
Ezi Audio-Technica Akukho mveliso ifunyenweyoBanento ebizwa ngokuqinileyo ngu "auto-amandla", ayisiyonto ngaphandle konxibelelwano oluzenzekelayo oluqhelekileyo kwizixhobo ezibhangqiweyo I-Bluetooth 5.0, Oku kuthetha ukuba kwakamsinya nje ukuba sizibeke ezindlebeni zethu ziya kuba sele zilungelelanisiwe.
Kule meko, inkampani ibhejile yonke into kwimigangatho yeQualcomm, kuqala nge-aptX codec ithandwa kakhulu kwaye iyakwazi ukuvelisa isandi se-HiFi ngaphandle kwentambo, esiyiqinisekisile ngoTidal kunye neHuawei P40 Pro yethu.
Kwenzeka into efanayo nge I-Qualcomm TrueWireless Stereo Plus ukunciphisa i-lag xa udlala ividiyo, okanye I-Qualcomm cVc ehlalutya kwaye iphucule isandi seminxeba kuthathelwa ingqalelo oko ikubambayo ngomboko omiselweyo osele uthethile ngawo.
Umgangatho wesandi, ukuzimela kunye namava
Siqala ngowona mgangatho ubaluleke kakhulu, nesandi:
Amaza asezantsi: Zikhona ngoku, nangona zisasazeka kakhulu kumaza aphakamileyo nakwiLitye
AmaRhoqo aPhakathi: Amazwi ayabonakala kakhulu kwintetho yam, ngakumbi isetyenziselwa ii-headphone zentengiso. Uluhlu olubanzi kunye nezixhobo zahluke kakhulu, kodwa kuya kufuneka ube ngumthandi wolu hlobo lwemveliso ukuze uyixabise ngokulungileyo Iirekhodi zeBohemian, Ndizonwabele.
Amaza aphakamileyo: Zilungelelene kakuhle, amazwi aphakamileyo abekhona, ngaphandle kokuncwina.
Andifumananga nesandi esaphukileyo okanye esimdaka, okuyimpumelelo yokwenene kuthathelwa ingqalelo yokuba sijamelene ne-TWS headphone ngeBluetooth.
Okukwintsusa: I-Audio-Technica I-ATH-CK3TW Banikezela ngokubonakalayo okumangalisayo kuyo yonke imiqulu yabo, ngaphandle kokuvelela ngokukodwa kwimilinganiselo ephezulu, ngokuchanekileyo ngenxa yokucoceka kwesandi sabo.
Ngoku siya ngqo kwinkululeko, uphawu luthembisa iiyure ezingama-6 zokuzimela kwee-headphone kunye neeyure ezingama-24 ngaphezulu ngebhokisi yokutshaja, into esele izalisekisiwe, malunga neeyure ezingama-26 sikwazile ukuyisusa ekusebenziseni kwethu kwesiqhelo. Iintlawulo ziya kukuthatha ngaphezulu nje kweyure iyonke.
Ityala, Ibonisiwe ukuba intofontofo kwaye isebenza ngokufanelekileyo ngaphandle kobungakanani bayo, inesistim esinamandla esisebenza ngemagnethi, iyasinceda ukubeka ii-headphone endaweni yazo ngaphandle kwengxaki kwaye ibonakalisile ukuba iyanyangeka kwiimvavanyo zethu.
Ungazifumana ngokuqinisekileyo ezi Akukho mveliso ifunyenweyo kunye newebhusayithi yayo esemthethweni (LINK).
Umgangatho wesandi esikhohlakeleyo kunye nokucaca
Ixabiso elifanelekileyo kakhulu
Ibhokisi inkulu kakhulu
Ngaphandle komngcipheko kuyilo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Audio-Technica ATH-CK3TW, yeyona nto ibalaseleyo? [UHLAZIYO]
Sivavanye izixhobo zikaHama "ezinefuthe"